Ukuvavanya uBunkokeli ngeTelecommuting | Martech Zone
Ukuvavanya uBunkokeli ngeTelecommuting
NgoLwesine, uJuni 26, 2008 Lwesine, Disemba 15, 2016 Douglas Karr
Ngale ngokuhlwa ndiye ndadibana noPat Coyle nabanye Abahlaziyi kwiNdlu evulekileyo kaPat kwikomkhulu elincinane laseIndiana.
Ingxoxo enye ebendinayo ibikukuLalita Amos, umqeqeshi wobunkokeli kunye nengcali kwezabasebenzi, I-Purdue Alumni, kunye noNjingalwazi oManyeneyo kwi NYU. Ndonwabe ngokwabelana ngeqonga noLalita xa bendithetha no IABC malunga nokusetyenziswa kweeNethiwekhi zeNtlalo ngaphakathi kweenkampani.
U-Lalita uqaphele ukuba itekhnoloji inyanzela abaphathi ukuba babe ziinkokheli ezingcono. Enye yeemveliso zethungelwano ngocingo kukuba abaphathi abakwazi ukwenza into encinci, bagwebe umntu ngokwembonakalo yabo okanye bamamele intlebendwane yeofisi ukwenza umbono wobuxoki. I-Telecommuting ifuna abaphathi ukuba banxibelelane ngokufanelekileyo, balawule ngokufanelekileyo iishedyuli, babathembe abasebenzi babo, babeke kwaye bagcine izicwangciso zentsebenzo ezifanelekileyo kunye neenjongo, kunye nokulinganisa intsebenzo yabasebenzi kwimisebenzi yabo ngokwenene ukusebenza!
Akukho nto inokubeka inkokeli ebuthathaka ngaphaya kokwenza inkqubo yokuqina yomnxeba! Nangona izisa uthotho lweminye imiceli mngeni, inkokheli enkulu inokuqhuba imveliso engaqhelekanga ngenkqubo enje, ngelixa iphucula ukoneliseka kwabasebenzi kunye nokugcinwa. Ewe, ngexabiso legesi elingaphezulu kwe- $ 4 / gal, kukho inkuthazo yemali nayo.
tags: ULalita Amosubunkokhelingocingowfhukusebenza ekhaya
Uyilo lwe-imeyile eNtsha ngokumangalisayo (Iyafuneka)
Uphendlo lukaGoogle kwiSerp?
Jun 27, 2008 ngo-7:47 AM
Kubonakala ngathi kukho ukuthandabuza kwiinkampani ukuba zamkele unxibelelwano ngefowuni nangona kungqinwe ukuba kulungile kokusingqongileyo, impilo yengqondo yabasebenzi, singasathethi ke ngeeyure kunye nokulawula umqeshwa ukuba abuyele ebomini bakhe. Mhlawumbi kufuneka kubekho uqeqesho olungakumbi lweenkokeli kunye nabaphathi malunga nendlela yokulawula abasebenzi babo bonxibelelwano ngomnxeba.
Jun 27, 2008 ngo-8:55 AM
Andizange ndivume ngakumbi! Ndithethe noLalita ngalo mbandela kanye nokuba kunokuba 'kufanelekile iphepha elimhlophe' ukubeka uxwebhu olunolwazi malunga noncedo lonxibelelwano kunye neesampulu zemigaqo-nkqubo, ulwazi olusemthethweni, njl.
Jun 27, 2008 ngo-9:45 AM
Andiqinisekanga ngale nto. Kumsebenzi wam wokugqibela, ndandiseofisini kwaye umphathi wam wayenxibelelana ngocingo. Kwakubi kakhulu. Wayenombono wento eyenzekayo kwaye le nto ndiyenzayo yayingachanekanga. Ndicinga ukuba wayezama ukulawula kude, kwaye yandiqhuba amantongomane. Xa kwafika kwinqanaba lokuba ndichithe ixesha elininzi ndizama ukubonisa ukuba ndiyawenza umsebenzi wam kunokusebenza ngokwenene, ndayeka.
Jun 27, 2008 ngo-10:24 AM
Akukho kungabi nantlonipho okuthethiweyo, kodwa mhlawumbi oko kuyayixhasa inqaku lokuqala…ukuba olu hlobo lolwakhiwo lutyhila ubuthathaka kumphathi ohluphekayo. Ngelishwa kule meko ibinguwe ofumene “isiphelo esifutshane”, kodwa ukuba kukho uqhushululu olwaneleyo phakathi kwamajoni malunga nonxibelelwano lomphathi othile nabasebenzi, oko kuya kuvula amehlo kubaphathi abaphezulu kwimiba yomphathi…”ukubatyhala ngaphezulu udini” libinzana endikholelwa ukuba lalisetyenziswa.
Ngethemba xa uhamba, ukwazi ukuya kwinto engcono?